व्यवहार स्वास्थ्य सेवा र टक थेरापी।
छिमेकी परिवार अभ्यासमा, तपाईं हामीले प्रदान गर्ने हेरचाहको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। तपाइँको NFP डाक्टर वा नर्स व्यवसायी तपाइँको स्वास्थ्य र कल्याण साझेदार हो। हाम्रा व्यवहारिक स्वास्थ्य कर्मचारीहरू, साथै नर्सहरू, बिरामी अधिवक्ताहरू र चिकित्सा सहायकहरूले थप सहयोग प्रदान गर्छन्।
NFP मा व्यवहार स्वास्थ्य टोलीले अवस्थित बाल, किशोर र वयस्क बिरामीहरूको लागि टक थेरापी (जसलाई मनोचिकित्सा पनि भनिन्छ) सेवाहरू प्रदान गर्दछ। मनोचिकित्सा सेवाहरू (जसले मानिसहरूलाई उपचार गर्न मद्दत गर्न औषधि प्रयोग गर्दछ) पनि उपलब्ध छन्। यी थपिएको व्यवहार स्वास्थ्य सेवाहरूले हामीलाई सबै स्वास्थ्य उपचार गर्न अनुमति दिन्छ
हाल NFP मा हेरचाह प्राप्त गर्ने बिरामीहरूको चिन्ता - दिमाग र शरीर।
व्यवहार स्वास्थ्य के हो?
तपाइँको जीवनको कुनै बिन्दुमा, तपाइँ कठिन परिस्थिति वा चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको आफ्नै सामना गर्न गाह्रो हुन सक्छ। जब तपाईं यस बिन्दुमा हुनुहुन्छ, NFP व्यवहार चिकित्सकसँग एक-एक-एक मूल्याङ्कन तपाईंलाई सामना गर्न मद्दतको लागि पहिलो कदम हुन सक्छ। मूल्याङ्कनले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई तपाईंको जीवनमा समस्याहरू निम्त्याउने कुराहरू पहिचान गर्न तपाईंसँग काम गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यसपछि तिनीहरूले तपाईंलाई राम्रोसँग बुझ्न वा तपाईंको अवस्था सुधार गर्न वा तपाईंले ठीक गर्न नसक्ने चीजहरूसँग व्यवहार गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। तिनीहरूको लक्ष्य तपाईलाई कठिन जीवन परिस्थितिहरूसँग अझ सफलतापूर्वक व्यवहार गर्न मद्दत गर्न उपकरणहरू प्रदान गर्नु हो।
टक थेरापी मद्दत गर्न सक्छ
याद गर्नुहोस् जब तपाईंले कुनै साथी वा परिवारको सदस्यसँग कुरा गर्नुभयो जुन तपाईंलाई चिन्ता गरिरहेको थियो र उनीहरूले तपाईंलाई यो काम गर्न मद्दत गरे? तपाईंले यसलाई फेरि प्रयास गरेको समय सम्झनुहोस् र चीजहरू राम्रोसँग काम गरेनन्? यस्तो समय हो जब तपाइँ एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर संग कुरा गर्न आवश्यक छ। र त्यो हो जब तपाइँ हाम्रो व्यवहार स्वास्थ्य कर्मचारी मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई टक थेरापी भन्छौं। नजिकको साथी वा परिवारको सदस्यसँग कुरा गर्नु भन्दा कुराकानी थेरापी कसरी फरक छ? हामी आफू सबैभन्दा नजिक भएकाहरूलाई जोगाउन चाहन्छौं, त्यसैले हामी उनीहरूलाई सधैं हाम्रा भावनाहरूको बारेमा "सत्य र सत्यबाहेक अरू केही" भन्दैनौं। धेरै मानिसहरूका लागि, सुन्न र मद्दत गर्न तालिम प्राप्त खुला विचारधारा भएका व्यक्तिसँग धेरै कुरा साझा गर्न सजिलो हुन्छ। टक चिकित्सकहरूले पक्ष लिँदैनन्; तिनीहरूले निर्णय वा पूर्वाग्रह बिना तपाईंका चिन्ताहरू सुन्छन् र तपाईंलाई नकारात्मक विचार र भावनाहरू, चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरू र सकारात्मक परिवर्तनहरू गर्न जीवन परिस्थितिहरूको सामना गर्ने तरिकाहरू बनाउन मद्दत गर्न सक्छन्। व्यवहार स्वास्थ्य र कुराकानी थेरापी अरू कसैले तपाईंलाई "गरेको" छैन। किनभने तपाईं प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ, यसले ठूलो फरक पार्न सक्छ जब तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले आफ्नो जीवनका भागहरूमा नियन्त्रण गुमाउनुभएको छ।
टक थेरेपी कति समय लाग्छ?
व्यक्तिगत कुराकानी थेरापी अपोइन्टमेन्टहरू सामान्यतया 30 देखि 45 मिनेटसम्म रहन्छ। तपाइँको पहिलो भेटघाट लामो हुन सक्छ किनकि तपाइँको चिकित्सकले तपाइँलाई र तपाइँको हालको अवस्था राम्रोसँग जान्नको लागि प्रश्नहरू सोध्नेछ। कतिपय बिरामीहरू उनीहरूलाई के कुरामा परेको छ भनेर काम गर्न केही भेटघाटहरूका लागि आउँछन्। अरूहरू लामो समयको लागि आउँछन् - हप्ताहरू, महिनाहरू, कहिलेकाहीँ एक वर्ष वा बढीको लागि। अरूहरू महिनौं र वर्षहरूमा थेरापीबाट भित्र र बाहिर आउँछन्, केवल आधार छोउन र तिनीहरू सही ट्र्याकमा रहेको सुनिश्चित गर्न।
साइटमा एकीकृत चिकित्सा र व्यवहार/मानसिक स्वास्थ्य सेवा
एकीकृत चिकित्सा र व्यवहार/मानसिक स्वास्थ्य हेरचाह भनेको तपाईको शारीरिक स्वास्थ्यले तपाईको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ र मानसिक स्वास्थ्य चिन्ताले तपाईको शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ। दुबै सँगै उपचार गर्दा शारीरिक र व्यवहारिक स्वास्थ्य परिणामहरूमा उल्लेखनीय सुधार हुन्छ। NFP मा, व्यवहार स्वास्थ्य कर्मचारीहरू चिकित्सा प्रदायकबाट केही कदम मात्र टाढा छन्, त्यहाँ भावनात्मक समस्याहरूसँग संघर्ष गरिरहेका बिरामीहरूको लागि मार्गदर्शक हातको रूपमा आवश्यक पर्दा। हामीले तपाईंलाई आवश्यक पर्ने व्यवहारसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउँदैछौं भनी सुनिश्चित गर्नको लागि, हामी तपाईंलाई रेफरल प्राप्त गर्नु अघि आफ्नो प्राथमिक हेरचाह प्रदायकलाई कम्तिमा तीन पटक हेर्न अनुरोध गर्छौं।
NFP को इजाजतपत्र प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता र इजाजतपत्र प्राप्त पेशेवर क्लिनिकल सल्लाहकारहरूको टोलीसँग व्यापक शिक्षा र प्रशिक्षण छ जसले तपाईंलाई भावनात्मक समस्याहरू र कठिन जीवन परिस्थितिहरू सहितको सामना गर्न मद्दत गर्न योग्य बनाउँछ:
• शारीरिक र यौन दुर्व्यवहार
• रक्सी र लागू पदार्थ दुरुपयोग/लत
• अवसाद, चिन्ता र मूड समस्याहरू
• सम्बन्ध/पारिवारिक समस्याहरू
• स्कूल वा काम समस्याहरू
• परिवारका सदस्यहरूको हेरचाह गर्ने
• रोग (मधुमेह जस्ता दीर्घकालीन अवस्थाहरू सहित)
• यौन अभिमुखीकरण/लिंग पहिचान
व्यवहार स्वास्थ्य टोलीका अन्य सदस्यहरूमा नर्सिङ र मनोचिकित्सा समावेश छन्। हाम्रा मनोचिकित्सक विशेषज्ञहरूले तपाइँसँग, तपाइँको प्राथमिक हेरचाह प्रदायक र तपाइँको टक थेरापिस्टसँग काम गर्दछ यदि तपाइँलाई सामना गरिरहनुभएको कठिनाइहरूको उपचार गर्न औषधि आवश्यक छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न। हाम्रो व्यवहार सम्बन्धी स्वास्थ्य कर्मचारीहरू तपाईंको लागि सबैभन्दा राम्रो काम गर्न, समस्याहरू पहिचान गर्न र तिनीहरूलाई काम गर्न मद्दत गर्न समर्पित छन्। यदि तपाईंलाई थप, थप विशेष सेवाहरू चाहिन्छ भने, हामी तपाईंलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछौं। हामीसँग विशेष सेवाहरूका अन्य प्रदायकहरूसँग बलियो सम्बन्ध छ, त्यसैले हामी तपाइँको व्यक्तिगत अवस्थाको आधारमा उपलब्ध उत्तम मद्दतको लागि तपाइँलाई NFP बाहिर पठाउन सक्छौँ। हामी तपाईंलाई कल गर्नको लागि नाम र फोन नम्बर मात्र दिनेछैनौं। हामी प्रक्रियामा सामेल हुनेछौं, तपाईलाई आवश्यक पर्ने हेरचाह कहाँ पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै।
व्यवहार स्वास्थ्य प्रदायकहरू
एलिजाबेथ एन्थोनी, LSW
मेगन ब्रिंकर, LISW-S
नताली स्टार्क, LISW-S
होली क्लिफेल थॉमस, LISW-S
माइकल कोहेन, LISW-S
क्रिस्टन ओडो, LSW
रिचर्ड हिल, एमडी मनोचिकित्सा
व्यवहार स्वास्थ्य सूचना विज्ञान र कार्यालय समर्थन निर्देशक
पॉल हिर्शेल, MSSA, LISW-S
उपाध्यक्ष - व्यवहार स्वास्थ्य र हेरचाह एकीकरण
पेगी कीटिंग, LISW-S
LPCC, दर्ता कला चिकित्सक
Madeleine Keller, LPCC, दर्ता कला चिकित्सक
व्यवहार स्वास्थ्य को वरिष्ठ निर्देशक
लरेन म्याकगोवन, LPCC-S
सुसान ओ'ब्रायन, APRN-CNS
व्यवहार स्वास्थ्य चिकित्सक र एपिक सामग्री बिल्डर
क्याथरीन एल. पोसेन्डेक, LISW-S
लरेन टकर, LPCC
बेथ मीकर, LISW
मोली रेहक, LISW-S
एलेना स्मिथ, PMHNP-BC
क्रिस्टा रुबेल्के, PMHNP-BC
व्यवहार स्वास्थ्य क्लिनिकल विकास को वरिष्ठ निर्देशक
एलिजाबेथ एन्थोनी अप्रिल २०२१ मा NFP मा सामेल भइन्। उनले क्लिभल्याण्ड स्टेट युनिभर्सिटीबाट सामाजिक कार्यमा स्नातकोत्तर र जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीबाट सामुदायिक मनोविज्ञानमा डक्टरल डिग्री हासिल गरिन्। NFP मा सामेल हुनु अघि, बेथले केस वेस्टर्न रिजर्भ युनिभर्सिटीको मन्डेल स्कूल अफ एप्लाइड सोशल साइन्समा अनुसन्धानकर्ता र सहायक प्रशिक्षकको रूपमा काम गरे। उनको क्लिनिकल रुचिहरूमा बालबालिका, किशोरकिशोरी, गर्भवती/अभिभावक महिला र तिनीहरूका परिवारहरूको समग्र कल्याण सुधार गर्न काम गर्ने समावेश छ।
Megan Brinker 2019 मा एक व्यवहार स्वास्थ्य चिकित्सकको रूपमा छिमेकी परिवार अभ्यासमा सामेल भइन्। मेगनले क्लिभल्याण्ड स्टेट युनिभर्सिटीबाट सामाजिक कार्यमा मास्टर र मियामी विश्वविद्यालयबाट कलामा स्नातक गरे। उनीसँग बालबालिका र वयस्कहरूसँग काम गर्ने एक दशकको अनुभव छ। मेगनले पहिले फ्रन्टलाइन सेवामा ट्रमा थेरापिस्ट र विश्वविद्यालय अस्पतालहरूमा काम गरिन्।
प्रमाणीकरण(हरू): ट्रमा-केन्द्रित संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (TF-CBT)
नेटली स्टार्कले केस वेस्टर्न रिजर्भ युनिभर्सिटीबाट सामाजिक कार्य र बायोएथिक्समा मास्टर डिग्री हासिल गरे। Natalie ले आघात, चिन्ता र मुड समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गरी आवासीय सुविधाहरू, अस्पतालहरू र बाहिरी रोगी समुदायको मानसिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेटिङहरूमा काम गरेको छ। उनीसँग आघात सूचित हेरचाहमा व्यापक अनुभव छ र केस वेस्टर्न रिजर्भ विश्वविद्यालयको मन्डेल स्कूल अफ एप्लाइड सोशल साइन्समा सहायक संकाय सदस्य हुनुहुन्छ। Natalie 2019 मा एक व्यवहार स्वास्थ्य चिकित्सकको रूपमा NFP व्यवहार स्वास्थ्य टोलीमा सामेल भइन्।
होली क्लिफेलले मिशिगन विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा स्नातक डिग्री र सामाजिक प्रशासनमा मास्टर अफ साइन्स र केस वेस्टर्न रिजर्भ विश्वविद्यालयबाट गैर-नाफामुखी व्यवस्थापनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। होली एक द्विभाषी सामाजिक कार्यकर्ता हुन् जसमा केस व्यवस्थापन, सामुदायिक संगठन र विशेष प्रशिक्षणमा लगभग २० वर्षको अनुभव छ। होली NFP मा एक व्यवहार स्वास्थ्य चिकित्सक को रूप मा काम गर्दछ।
माइकल 2021 मा छिमेकी परिवार अभ्यासमा सामेल भए। उनी लगभग 20 वर्ष खुद्रा व्यापार पछि मानसिक स्वास्थ्य पेशामा प्रवेश गरे। उनले मनोविज्ञान र सामाजिक कार्यमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनले आत्महत्या रोकथाम, घरबारविहीन आश्रय र सामूहिक घरहरूमा काम गरेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहँुच आधारभूत मानव अधिकार हो भन्ने उनको विश्वास छ ।
Noha Elsayed 2018 मा छिमेकी परिवार अभ्यासमा सामेल भइन्। उनले विवाह र पारिवारिक उपचार/परामर्शमा कलामा स्नातकोत्तर र अक्रोन विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा कलामा स्नातक गरे। नोहा व्यक्ति, दम्पती र परिवारलाई गुणस्तरीय क्लिनिकल सेवा र मार्गदर्शन प्रदान गर्न इच्छुक छिन्।
क्रिस्टन ओड्डोले एनएफपीसँग इन्टर्नशिप पूरा गरे, त्यसपछि 2020 मा व्यवहारिक स्वास्थ्य चिकित्सकको रूपमा हाम्रो टोलीमा सामेल भए। क्रिस्टनले ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीबाट सामाजिक कार्यमा स्नातकोत्तर र जोन क्यारोल विश्वविद्यालयबाट सञ्चारमा स्नातक डिग्री हासिल गरेकी छिन्। NFP मा काम गर्न आउनु अघि, उनले वृद्ध वयस्क र शरणार्थी समुदायहरूको सेवा गर्ने धेरै गैर-नाफामुखी संस्थाहरूको लागि काम गरिन्।
डा. रिक हिलले दुवै पीएच.डी. न्यूरोसाइन्समा र केस वेस्टर्न रिजर्व युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिनबाट एमडी। उनले क्लिभल्याण्ड क्लिनिक फाउन्डेशनमा मनोचिकित्सामा आफ्नो इंटर्नशिप र रेसिडेन्सी पूरा गरे। उनले रेभेनवुड मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि मेडिकल निर्देशक र गाउगा काउन्टीको प्रमुख क्लिनिकल अधिकारीको रूपमा सेवा गरेका छन्। उनीसँग वयस्क बिरामीहरूको उपचार गर्ने धेरै वर्षको क्लिनिकल अनुभव छ। उहाँका धेरै सामुदायिक गतिविधिहरू मध्ये, उहाँले मानसिक रोग (NAMI) ग्रेटर क्लिभल्याण्डको राष्ट्रिय गठबन्धनको लागि मेडिकल सल्लाहकार बोर्डको सदस्यको रूपमा सेवा गर्नुहुन्छ। डा. हिल स्टाफ चिकित्सक, साथीहरू, निवासीहरू र मेडिकल विद्यार्थीहरूका लागि पर्यवेक्षकको रूपमा सेवा गर्छन् र केस वेस्टर्न रिजर्भ विश्वविद्यालयमा एक संकाय वरिष्ठ क्लिनिकल प्रशिक्षक हुन्।
पॉल हिर्शेल 2016 मा छिमेकी परिवार अभ्यासमा सामेल हुनुभयो र व्यवहार स्वास्थ्य सूचना र कार्यालय समर्थन निर्देशक हुनुहुन्छ। पलले प्रशान्त विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातक र केस वेस्टर्न रिजर्भ युनिभर्सिटीबाट सामाजिक प्रशासनमा विज्ञानको मास्टरको साथ स्नातक गरे। पलको व्यावसायिक अनुभवले बेलफेयर-जेसीबीमा सल्लाहकार, अमेरिकी रेड क्रसमा विपद् कार्य टोली स्वयंसेवक र फ्रन्टलाइन सेवामा धेरै परामर्श पदहरू समावेश गर्दछ।
पेग्गी किटिंगले क्लिभल्याण्ड स्टेट युनिभर्सिटीबाट मनोविज्ञान र सामाजिक कार्यमा मास्टर डिग्री प्राप्त गरे। उनी ओहायोमा धेरै वर्षदेखि चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गरिरहेकी छिन्। उनीसँग आघात, यौन र शारीरिक दुर्व्यवहार, रक्सी र अन्य लागूपदार्थको लत, असक्षमता, चिन्ता र डिप्रेसन सम्बन्धी समस्याहरूसँग काम गर्ने व्यापक प्रशिक्षण र अनुभव छ। उनको विशेष क्षेत्रहरूमा LGBT, महिला मुद्दाहरू, र पदार्थ दुर्व्यवहार/निर्भरता समावेश छ।
मेडेलिन केलर 2020 मा एक व्यवहार स्वास्थ्य चिकित्सकको रूपमा छिमेकी परिवार अभ्यासमा सामेल भए। उनले अर्लहम कलेजबाट स्टुडियो आर्टमा स्नातक र उर्सुलिन कलेजबाट कला थेरापीमा परामर्शमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरिन्। NFP मा सामेल हुनु अघि, उनले कला थेरापी र सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेटिङहरूमा परामर्श प्रदान गरे, यौन दुर्व्यवहार र आघात सम्बन्धी अन्य मुद्दाहरूमा विशेषज्ञता। मेडेलिनले सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई देख्छिन्।
मेरीन कुजिलाले 2013 मा एक व्यवहार स्वास्थ्य चिकित्सकको रूपमा छिमेकी परिवार अभ्यासमा काम गर्न थाले। उनले पहिले मानसिक स्वास्थ्य मूल्याङ्कनकर्ता, क्लिनिकल थेरापिस्ट, समूह सहजकर्ता र अल्कोहल र ड्रग थेरापिस्टको रूपमा रिकभरी रिसोर्समा काम गरिन्। मेरीनले यस क्षेत्रमा 15 वर्ष भन्दा बढी समय बिताएका छन् र क्लिभल्याण्ड राज्यबाट मनोविज्ञानमा कलाको स्नातक र जोन क्यारोल विश्वविद्यालयबाट परामर्श र मानव सेवामा कलाको मास्टर छ।
2015 मा छिमेकी परिवार अभ्यास संग सुरु गर्ने Lauren McGowan शैक्षिक नियुक्ति संयोजक हुनुहुन्छ। लरेनले सामुदायिक मूल्याङ्कन र उपचार सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, कम्पास रोज सेन्टर र द एटेन्सन सेन्टरमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग काम गरिसकेकी छिन्। उनले क्लिभल्याण्ड राज्यको मास्टर्स इन काउन्सिलिङ (CASAL) कार्यक्रममा सहायक प्रोफेसरको रूपमा धेरै वर्षसम्म मास्टर-स्तरका विद्यार्थीहरूलाई पढाइन्। लरेनले जोन क्यारोल युनिभर्सिटीबाट स्नातक डिग्री र क्लिभल्याण्ड स्टेट युनिभर्सिटीबाट काउन्सिलिङमा मास्टर अफ आर्ट्स गरेकी छिन्।
सुसान ओ'ब्रायनले 2014 मा व्यवहार स्वास्थ्य क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञको रूपमा छिमेकी परिवार अभ्यासमा सेवा गर्न थाले। उनले रोचेस्टर विश्वविद्यालयबाट मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य नर्सिङमा स्नातक डिग्री र विज्ञानको मास्टर प्राप्त गरे। सुले पहिले विश्वविद्यालय अस्पताल र रिकभरी रिसोर्समा काम गरिन्, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचार गर्दै।
क्याथरिन पोसेन्डेक 2017 मा NFP मा सामेल भइन् र एपिक सामग्री निर्माणकर्ता हुन्। क्याथरिनले ओहायो विश्वविद्यालयबाट श्रवण, बोली र भाषामा विज्ञानमा स्नातक र ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीबाट सामाजिक कार्यमा स्नातकोत्तर हासिल गरिन्। उनीसँग सामाजिक कार्यमा करिब एक दशकको विविध अनुभव छ। नेबरहुड पारिवारिक अभ्यासमा सामेल हुनु अघि, क्याथरिनले समुदायमा आधारित अन्तरिम निर्देशक सहित विभिन्न क्षमताहरूमा क्याथोलिक च्यारिटीहरूमा काम गरिन्।
लरेन टकर 2021 मा एक व्यवहार स्वास्थ्य चिकित्सकको रूपमा NFP मा सामेल भइन्। एक इजाजतपत्र प्राप्त पेशेवर क्लिनिकल सल्लाहकार, उनले मनोविज्ञानमा स्नातक डिग्री हासिल गरे, त्यसपछि उर्सुलिन कलेजमा भाग लिइन् जहाँ उनले परामर्श र कला थेरापीमा मास्टर डिग्री कमाए। NFP मा सामेल हुनु अघि, लरेनले ओहायोगाइडस्टोनमा धेरै वर्ष स्कूल सेवा थेरापिस्टको रूपमा काम गरिन्, मुख्यतया किशोर र किशोरहरूलाई मद्दत गर्दै। उपचारमा कलाको प्रयोग लरेनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्छ। उनी सेवाविहीन जनसङ्ख्या, महिला, बालबालिका र दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसाका पीडितहरूको वकालत पनि हुन्।
Selah Westfall एक बोर्ड-प्रमाणित नर्स व्यवसायी हो जो मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य मा विशेषज्ञता छ। उनले 2018 मा वाल्डेन विश्वविद्यालयबाट मास्टर डिग्रीको साथ स्नातक गरे। सेलाहले 2019 मा NFP मा सामेल हुनु अघि ट्रमा नर्सको रूपमा आकस्मिक विभागमा काम गरिन्। समुदायलाई सबैभन्दा प्रभावकारी हेरचाहको लागि चिकित्सा र मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू एकीकृत गर्ने अभ्यासको एक हिस्सा बन्न पाउँदा उनी उत्साहित छिन्, र गुणस्तरीय, दयालु प्रदान गर्न उत्साहित छिन्। र किशोर र वयस्कहरूलाई व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू।
बेथ मीकरले क्लिभल्याण्ड स्टेट युनिभर्सिटीबाट सामाजिक कार्यमा कलाको स्नातक र बोइस स्टेट युनिभर्सिटीबाट सामाजिक कार्यमा मास्टर डिग्री प्राप्त गरे। आफ्नो मास्टर डिग्री कमाउनु अघि, बेथले नेबरहुड पारिवारिक अभ्यासमा व्यवहार स्वास्थ्य इन्टर्नको रूपमा काम गरिन्।
Molly Rehak 2021 मा NFP मा व्यवहार स्वास्थ्य चिकित्सकको रूपमा काम गर्न थाले, आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई जटिल मानसिक स्वास्थ्य र चिकित्सा समस्याहरूको सामना गर्न मद्दत गर्ने व्यापक अनुभव ल्याएर। उनले जेभियर युनिभर्सिटीबाट सामाजिक कार्यमा स्नातक र अक्रोन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरिन्। NFP भन्दा पहिले, मोलीले क्लिभल्याण्ड क्याथोलिक परोपकारी माइग्रेसन र शरणार्थी सेवाहरूको लागि व्यवहार स्वास्थ्य विशेषज्ञको रूपमा काम गरिन्।
एलेना स्मिथ, PMHNP-BC बोर्ड-प्रमाणित मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य नर्स व्यवसायी (PMHNP-BC) हुन्। उनले ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन्। उनीसँग नर्सिङ र शिक्षामा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ। Alenna मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा भावुक छ, आघात/PTSD मा विशेषज्ञता, विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य विकार, पदार्थ प्रयोग, र जातीय र जातीय असमानता जसले व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक कल्याणलाई असर गर्छ। उनी यात्रा, पढ्न, कविता, स्वास्थ्य र फिटनेस मन पराउँछन्। Alenna ले 18 वर्ष र माथिका बिरामीहरूको उपचार गर्छिन्।
क्रिस्टा रुबेल्के 2021 मा बोर्ड प्रमाणित मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य नर्स व्यवसायीको रूपमा छिमेकी परिवार अभ्यासमा सामेल भइन्। क्रिस्टाले ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीबाट लेखा र वित्तमा डबल मेजरको साथसाथै केन्ट स्टेट युनिभर्सिटीबाट नर्सिङमा स्नातक र मास्टर डिग्रीको साथ व्यापार प्रशासनमा स्नातक डिग्री हासिल गरे।
NFP परिवारमा नयाँ प्रदायक थपिएको छ! वेन्डीले कम्बरल्याण्ड विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञान र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्नातक र वाल्डेन विश्वविद्यालयबाट मानसिक स्वास्थ्य परामर्शमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन्। उनी धेरै वर्षदेखि इजाजतपत्र प्राप्त व्यावसायिक सल्लाहकार बनेकी छिन्, अस्पताल, स्थिरीकरण एकाइ, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, ओपियोइड उपचार क्लिनिक र निजी अभ्यास सेटिङहरूमा काम गर्दै। आघात केन्द्रित संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (TF-CBT) र अन्य क्षेत्रहरूमा औपचारिक प्रशिक्षणको साथमा वेन्डीको विशेषता क्षेत्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, बाल दुर्व्यवहार उपचार/रोकथाम, संकट हस्तक्षेप/व्यवस्थापन, पदार्थको प्रयोग, आघात, दौडमा आधारित आघातजन्य तनाव, सल्लाहकार विकास/ पर्यवेक्षण, घरेलु हिंसा, आत्म-हेरचाह, र महिला मुद्दाहरू।
व्यवहार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
EMDRIA | ओहायो रासायनिक निर्भरता व्यावसायिक बोर्ड | ट्रमा-केन्द्रित संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (TF-CTB)